WAR DEG DEG AH+SAWIRO: Banaanbax xoog leh oo ka socda Gaalkacyo & Xaaladda oo kacsan | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia	Tuesday, September 27th, 2016	Home
WAR DEG DEG AH+SAWIRO: Banaanbax xoog leh oo ka socda Gaalkacyo & Xaaladda oo kacsan
Sep 22, 2016 - 1 Jawaab	GAALKACYO(PTIMES)- Boqolaal Banaanbaxayaal ah ayaa iskugu soo baxay qeybo kamid ah waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug, waxayna Taayiro ku gubayaan qaar kamid ah jidadka muhiimka ah ee magaaladaas.
Banaanbaxan ayaa isku bedalay mid ay dadweynuhu diideen in lagalo xarumaha muhiimka ah ee magaalada Gaalkacyo, sidaas oo kale goobaha Ganacsiga ee ku dhaw faras-magaalaha ayaa la xiray, iyadoo ay ganacsatadu diidan yihin sida ay wax ku socdaan.
Dadweynaha ayaa ku dhawaaqayo hadalo ay uga soo horjeedaan Heshiis ay dawladda iyo Ganacsatadu gaaren, kaas oo dhabaha u xaaraya in dib loo furo isku socodka Koonfurta & Waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
RIIX HALKAAN SI AAD U AKHIRSATO GO’AAMADDA DAWLADDU QAADATAY
Waxgaradka magaalada qaarkood ayaa goobta tagay oo dadka la hadlay waxay u sheegeen in ay Is dajiyaan, sidaas oo kalena waxay cadeeyeen in aysan aqbali doonin in dib looga laabto go’aamadii ka soo baxay Madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland.
osman says:	September 22, 2016 at 12:03 pm	Asc wr wb waxaan Ku waaninayaa shacabka gaalkacya inaysan waxba gubin so nabadgalyo Ku jirto xaqqa ugu sheegaan dawlada oo yiraahdaan goaankii Camay qaatay waxaa uu ahaa go aan xaqq ah oo shacabka mudug kaga badbaadeen cadoowgaa baraxlay.
Mid layiraahdo Ali yaa maalin dhaweyd igu caayay webkaan oo Yuri gaas baa laqbiil ahay wax lagama sheegi karo. Gaaska aad sheegayso innaga shacabka puntland yaa doorananay was kaa waxaan ka digaynay Ku kacay. Gaas Dan uma hayo shacabka puntland hadduu caaqiba Lee yahay xudduuda uma fureen cadoowga galmudug ee dadkeena ku laayay gaalkacya suuqii dayax burburiyay more than 3000,000 dollar ayaa khasaartay iyo cisbitaalkii gaalkacyo kuburburay. Mt Ali qurunka iyo qabyaaladA kala dhex ummada adiga iyo gaasba puntland Dan uma haysaan we shacabka gaalkacya xuduudiina ka xirta mooryaantaa aan naxanin di ubadkeena ubadbaado iyo waxgaradkeena.
Guul iyo gobonnimo ayaa idiin rajaynayaa iyo puntland oo kabadbaado cadoowga nagu dhex jiro iyo kandibadda.